Angina (namathansela acute) - akuyona nje ukungakhululeki emphinjeni, kodwa futhi isayithi ukutheleleka emzimbeni. ukwelashwa kulesi sifo kuhlanganisa nokwamukela amalungiselelo ezahlukene, phakathi okuyizinto ejenti elwa namagciwane. Kulokhu, iziguli kaningi ukubuza odokotela kanye kunodokotela: - Ukwesaba dysbacteriosis nokungezwani komzimba okubangwa imithi "Yini baphuze imithi umphimbo obuhlungu?". Kodwa ngaphandle imithi hhayi angenza. Ukwelashwa ngemithi elwa namagciwane kunciphisa izimpawu angina. Ukunciphisa amathuba izinkinga ngemva kokuhlinzwa, okuyinto ebaluleke kakhulu esimweni isifo esithathelwanayo.
Angina: imithi elwa namagciwane okungase zaphathwa izingane kanye nabantu abadala?
Exacerbation ka namathansela ezingamahlalakhona futhi ifomu acute it is ezibangelwa amagciwane - Staphylococcus futhi streptococcus, izinhlayiya viral, isikhunta-Ascomycetes. Ukuqinisa umsebenzi wabo kuholela ukuvuvukala okukhulu amalaka nezingxenye ezizungezile esiyingini pharyngeal. Fever, isiguli uzizwa kabi emphinjeni. Kukhona zokuzikhukhumeza, ububomvu noma ubovu qwembe follicle e amalaka. Le ndlela ibizwa nasemkhakheni angina evamile. Amafomu ezivame kakhulu ngakho: lacunar, follicular, Bluetongue.
Yamukela ngesikhathi nemithi namathansela eziqukethe izinto, imithi elwa namagciwane:
penicillin akuzange kusize,
Yini isiphuzo imithi obukhulu emphinjeni izingane, enquma nodokotela bezingane, udokotela ENT ezingane. Odokotela, ngiphakamisa imithi okuncike kwinkampani isifo ngoba ingane noma umuntu omdala, siholwa imiphumela microbiological (zokutshala). Ngokuvamile, isiguli hhayi kuphela antibiotic, kodwa futhi batusa ukuba afeze ukwelashwa ahlobene.
Yikuphi imithi elwa namagciwane ziyasebenza ngoba umphimbo obuhlungu?
Ukukhetha i-ejenti elwa namagciwane, isiguli udinga ukwazi lapho baphuze imithi umphimbo obuhlungu. Ukuze sithathe imithi can hhayi kuphela esikhathini esidlule, kodwa futhi kusukela isizukulwane esedlule sakwa izidakamizwa:
penicillin akuzange kusize eziningana. Leli qembu kuhlanganisa izidakamizwa "Amoxicillin", "Bitsillin-5", "Ampicillin", "Amoxiclav". Bona zivimbela umsebenzi streptococci, ubuthi ongaphakeme ukuba abantu, ungenalo ukonakaliswa microflora emathunjini.
imithi elwa namagciwane Cephalosporin like penicillin akuzange kusize, ngempumelelo ekwelapheni ifomu angina catarrhal. Izidakamizwa alesi sigaba, "Cefuroxime" ( "Aksetin" "Zinnat"), "Ceftriaxone", "cefotaxime", "cefadroxil".
Macrolides asetshenziswa ukwelapha ezihlukahlukene namathansela. ubuthi lwabo abantu lingaphansi kunalokhu ukuthi ezinye ejenti elwa namagciwane. Izidakamizwa kuleli qembu, "Erythromycin", "midecamycin", "Spiramycin". Okuhle angina-antibiotic - kusho "Azithromycin" (alingana - izidakamizwa "Sumamed").
Indlela ukuthatha imithi namathansela?
Qaphela ukuthi kungaba khona ukusabela iguliswa penicillins futhi cephalosporins. Okumele kuqashelwe yokusebenzisa le mithi iziguli elwa namagciwane abaphethwe izifo kwesibindi nezinso. Okuqakathekileko umbuzo yini ukuphuza imithi umphimbo obuhlungu hhayi kuphela. Kusekhona inkinga yenkambo imithi. Uma izidakamizwa isetshenziswa ngaphansi kuka 5-10 izinsuku, zingabameleli sifo ngesimo asebenzayo. Kuyadingeka ukuba athobele eshiwo ku imiyalelo ukulandelana izidakamizwa: ngaphambi kokudla, ngesikhathi noma ngemuva kokudla.
Nge-angina, ngaphandle amafomu elwa namagciwane ezidingekayo yokwelapha concomitant. Lo mqondo uhlanganisa gargling nezixazululo kwezidakamizwa infusions amakhambi, inhalations futhi licindezele isicelo.
Khetha ehlobo amasudi